Nnukwu Obi Nwanyị Nwanyị Nwanyị Bernal 151CM TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
Stylekpụrụ bebi ndị Europe,Abụba mmekọahụ bebi
Bernal - Nnukwu ịnyịnya ibu Blue Anya 151CM TPE Dolhụnanya nwa bebi
* A na-ebupụ ngwaahịa nwa bebi niile na-akwụ ụgwọ n'efu. Enweghị ụgwọ zoro ezo.
* Igbe pụrụ iche maka ịchekwa na ibugharị ụmụ bebi mmekọahụ. Ndị ọzọ enweghị ike ịmata ya dị ka nwa bebi si n'èzí - ichebe nzuzo gị.
* Ezigbo bebi anyị bụ silicone ọgwụ na-adịghị emerụ ahụ (TPE), nke fọrọ nke nta ka ọ dị nro dịka ezigbo ndị mmadụ.
* Enwere ike idowe ya ebe obula dika ezigbo nwanyi. Nwa bebi ọ bụla na-enwe mmekọahụ nwere ezigbo ọkpụkpụ a na-ahụkarị. Nwere ike iwetara gị oke agụụ mmekọahụ.
* Anyị nwere nnukwu nhọrọ nke nhọrọ maka ụmụ bebi ịhụnanya nke nha na ụdị dị iche iche.
Ndepụta nke Bernal:
Elu ： 59 sentimita (151cm)
Ibu ibu ： 69 lbs (31.5kg)
Bust ： 37 sentimita (95cm)
N'úkwù ： 18 sentimita (47cm)
Onyinye ： 7.1 sentimita (18cm)
Ntụ ： 6.3 sentimita (16cm)
Ogwe aka: 7.1 sentimita (18cm)
Ichikota 55.2*16.6*11.9 inches(140*42*30cm)